HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulJawaabta Channel Istanbul ee Imamoglu oo u socota Wasiirka Turhan: Dadka ayaa Xayiray Mashruuca 23 bishii Juun
imamoglundan wasiirka turhana kanaalka istanbul jawaab shacabka ayaa baajiyay mashruucan bishii juun
Jawaabta Channel Istanbul ee Imamoglu oo u socota Wasiirka Turhan: Dadku waxay hakiyeen Mashruuca 23 bishii Juun; Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu, ka hor kulanka Golaha si toos ah loogu sii daayo MHP, GOOD Party oo wuxuu booqday kooxaha CHP. Emamoglu wuxuu carrabka ku adkeeyay in arrimaha guud ee koox kasta ay tahay kon Istanbul, uuna uga jawabay su’aalaha suxufiyiinta booqashada kadib.
Imamoglu, Wasiirka Gaadiidka Mehmet Cahit Turhan, oo ah mashruuca Channel Istanbul, "Waxaan ka mudaaharaadnay IMM", su'aasha ku saabsan ereyada, "2012, 2014, 2015, 2016, xitaa 2018'de waxaa jira borotokoolno u dhexeeya mas'uuliyiinta hay'addaas. Laakiin borotokoolka, Mudane Wasiir, waxaad u malaynaysaa, inaanu saxeexnay shaqada inay dhammaatay. Haddii Wasiirka doonayo inuu keydiyo khariidad ama burburiyo shaashadda Istanbul, ha ka xumaanin, ma uusan sameyn wax cilmi baaris ah oo ku saabsan mowduucan. Waxaan had iyo jeer uga digayaa Mudane Wasiirka in uu sameeyo bayaan isagoo baaritaan iyo falanqeyn ku sameynaya nidaamka si qoto dheer. Laakiin nasiibdarro sharraxa nasiib darrada ah. Intaa waxaa dheer, 23 Juun 2019'da noocan ah ee dib-u-eegista ah iyo dhammaan heshiisyada noocan oo kale ah horayba waa ay joojiyeen dadweynaha "ayaa ku jawaabay.
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu, ka hor kalfadhiga Golaha, sida ay u kala horreeyaan MHP, GOOD Party iyo xubno ka tirsan CHP, ayaa booqday hoolka kooxda ee dhismaha bartamaha Sara centralhane. Intii lagu jiray booqashada, İmamoğlu waxaa la socday Madaxweyne kuxigeenka kooxda 'CHP' Doğan Subaşı. Imamoglu wuxuu booqashadii ugu horreysay ku tegey kooxda MHP. Guul u rajeynta Duqa Magaalada Silivri Volkan Yılmaz iyo xubnaha MHP, İmamoğlu ayaa yidhi, “Toddobaadkan waa toddobaad mashquul ah. Toddobaadka miisaaniyadda. Waxaan ka hadlaynaa 2020. Waxaan rajeynayaa inay tahay natiijo wanaagsan. Dhowr bilood oo kala guur ah kadib, waxaan is idhi ku soo booqan. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan maqalno digniintaada ama waxaad rabto inaad muujiso haddii aad ka warqabaan muhiimadda toddobaadkan. Yilmaz wuxuu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay booqashada Imamoglu ee kooxda MHP wuxuuna yiri, “Midkeen kasta wuxuu ku leeyahay deyn magaaladan qadiimiga ah. Waxaan ku jirnaa wax walba oo anfacaya Istanbul. Waxaan kugula joogi doonnaa labadeenaba deyntii aan ku tagi lahayn Istanbul iyo deynteenna aan waddankan ku leennahay. Waxaan rabnaa inaad taas ogaato ”.
WAA INNAA IN LILAAHI WA INNAAJI ”
Stopmamoğlu joogsigiisii ​​labaad wuxuu ahaa kooxda wanaagsan ee 'GOOD Party'. Guddoomiyaha Gobolka Wanaagsan ee Istanbul Bugra Kavuncu waxaa weheliyay asxaabtiisa xisbiga. Imamoglu, khudbaddiisa halkaan ayuu ku yiri: “Sannad adag ayaa na soo maray. Waxaan ku jirnaa diyaarinta 2020. Qorshaheenna istiraatiijiyadeed iyo miisaaniyaddu waxay ku jiraan ajandaha. Marka waxyaabo badan ayaa ka kooban. Waxay ila tahay inaan soo marnay xilli ka duwan, gaar ahaan diyaarinta qorshe istiraatiijiyadeed. Waxay ahayd geedi socod loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay. Thanks to Xisbiga Wanaagsan waxay noo muujiyeen kaqeybgalkooda. Waxaan sidoo kale u sheegi doonnaa dadka isla luqadda ku ah Golaha waxaan rajeynayaa inaan helno bilow wanaagsan rajo 2020. Waxaan u arkaa inay iyagu wadaan is-waafajin. Ka sokow, soo-jeedimaha xisbiga 'GOOD' ayaa na hagaya. Waxaan jecelahay inaan uga mahadceliyo asxaabteena arintan jiritaanka madaxweynaha gobolkeena ..
"WAAN UGU DIYAARINAYNAA 2020"
İmamoğlu wuxuu sameeyay booqashadiisii ​​ugu dambeysay kooxda CHP. Emamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay inay tahay inay bilaabaan shaqadooda sababo la xiriira howlaha doorashada ee degdegga ah oo dib u dhigay bilaha 3. Waxaan rajeyneynaa toddobaadkan inaan ka wada hadalno labada geedi socodka habka ugu caafimaadka badan waxaanan isla qorsheyn doonnaa 3 si wada jir ah. Waxaan sidoo kale isla qorsheyn doonnaa qorshe istiraatiijiyad sanadleedka 2020 sanadlaha ah. Muhiimadeena waa Istanbul iyo mustaqbalka Istanbul. Dhammaanteen waan matali karnaa dhinacyadayaga, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aan ogahay inay tahay inaan wax ka qabno dareenka ah karti u lahaanshaha isu diyaarinta mustaqbalka annagoo ixtiraameyna danaha bulshada iyo wixii ka dambeeyay magaaladan. Sidaa darteed, anagoo leh dabeecad si dhab ah loo kala soocay, dabeecad tusaale ah, iyo aragti wadahadal iyo dadaal, waxaan rajeyneynaa inaan gaarno go'aan sax ah. ”
“ISTANBUL SI AY UGU AMAAHAN TAHAY DALKA Y
"Turkiga waa hab kale oo da 'dhexe," ayuu yiri İmamoğlu, "Istanbul degmada Metropolitan, waxaa la kulma habka awood kala duwan. 25 ma ahan wax caadi ah in laga fisho wax walba in ay noqdaan kuwo caadi ah sannado kadib. Maalin maalmaha ka mid ah, bilaha 3, bilo 5 ka dib si aan ula qabsano wax walba sax ma ahan in la sugo. Aadanaha ma ahan. Markaa waxaad awood ku jirtey, waad lumisay… Sida aan macquul ahayn, nidaam wacyigelintu way dhaafi doontaa. Marka taa la fiiriyo, howshani waa mid ugu macquulsan, uguna macquulsan oo 'Waan ku fahmeynaa' wuxuu yiri, ama adigu waad saxsan tahay, laakiin kani waa kan. Aynu si wada jir ah uga wada shaqeyno magaalada Istanbul Tani waa muhiim. Haddii aad caadi ahaan u neefsato 3 qoto dheer, waa inaad u qaadataa 13 qoto dheer si aad u hadasho. Habdhaqankan ayaa anfacaya Istanbul. Istanbul waa magaalo u baahan in ay neef qaadasho qoto dheer leh sameyso waxyaabaha saxda ah. Cillad-darrooyinka iyo khaladka ayaa bixinaya qiime aad u culus. Nasiib darrose, waxaan aragnaa dad badan oo aan ka labalabeyn inay difaacaan qalad maxaa yeelay waxay dhahaan xisbi siyaasadeed ama qof. Waxaan la laayo. Waxaan arkaa dad difaacaya khalad, labadaba xagga sare ee gobolka iyo halkan. Laakiin waa inaan dhaqancelinno bulshada iyo howsha. Waxaan rajeynayaa inay jiri doonto muddo ka bilaabmaysa maalin wanaagsan oo ku dhammaan doonta toddobaad wanaagsan ..
STANBUL KUGU SOO DHAWAADA QODOBADA MUHIIMKA AH EE WAA MUHIIM ”
Imamoglu, booqashooyinka xafladaha, ka dib wuxuu ka gudbay kaamirooyinka, ka jawaabey su’aalaha saxafiyiinta. Imamoglu, "AK Party ma uusan booqan kooxdu sababta," su'aasha, "Waxaan ka dalbanay ballan ballanqaad ah kooxda AK Party, laakiin maanta waxay yiraahdeen inay ku qaban doonaan shirar kooxeed dhismayaasha gobolkooda. Si kastaba ha noqotee, ma joojin karno sababta oo ah waxay yiraahdeen waxay la jaan qaadayaan baarlamaanka, laakiin waxaan u sheegi doonaa isla fikradaha xubnaha xisbiga AK ee gudoomiyaha barlamaanka ”. Imamoglu, “Wadahadalka miisaaniyada waa la qaban doonaa. Baarlamaan noocee ah ayaad filanaysaa ”. Imamoglu, su’aashan, “Dabcan wada hadal ayaa jiri doona. Inaad la kulanto maanka guud si aad ugu guuleysato dadka muhiimka ah ee Istanbul. Weedho siyaasadeed qaarkood ayaa la dhihi karaa si qaybaha qaarkood ay ii maqli karaan. Taasi waa run koox kasta oo siyaasadeed. Laakiin tani runtii waa halka go'aamada ku saabsan maaraynta miisaaniyaddan guud laga sameeyo. Markaa dhamaadka maalinta, waa inaan wax ka qabanaa oo go’aansannaa garaadka guud, dareenka saxda ah iyo iyadoo laga walaacsanahay sida aan wax sax ah ugu qaban karno dadka 16 milyan ee kunool magaaladan. Maaddaama go'aanka uu sii socon doono Jimcaha, laga yaabee in faahfaahinta miisaaniyadda aan laga wada hadlin maanta, laakiin maalin kale ayaa laga wada hadli doonaa. Go'aanno ayaa la gaari doonaa. Ka dib oo dhan, waxaan yeelan doonnaa toddobaad weyn. Labada qorshe istiraatiijiyadeed, oo lagu aasaasay is-dhexgalka ku dhowaad hal kun oo qof 250, laga yaabee qorshe istiraatiijiyadeed oo lagu sameeyay isugeyn aan aad ugu badneyn taariikhda adduunka ayaa ajandaha looga hadli doonaa. Mar labaad, waxaan rajeynayaa in miisaaniyadda iyo khariidadda wadada 2020 ay faa iido ugu yeelan doonto Istanbul ”.
AÇIKLAMA nasiib xumo wax ku ool ah ”
Madaxweynaha IMM, “Wasiirka Gaadiidka wuxuu sheegay inay jiraan qawaaniin iskaashi oo u dhexeeya IMM iyo wasaaradaha ay khusayso goobta fulinta mashruuca Kanal Istanbul. Ma jiraa borotokool cusub? Haddii ay jiraan borotokool oo la saxiixay xilliyadi hore, waxa ay noqon doontaa masiirka, waxaa jiri doona joojinta ”.
"2012, 2014, 2015, 2016 iyo xitaa 2018, waxaa jira borotokoolno lala sameeyey mas'uuliyiinta muddadaas gudaheeda hay'adda dhexdeeda. Laakiin borotokoolka, Mudane Wasiir, waxaad u malaynaysaa, inaanu saxeexnay shaqada inay dhammaatay. Haddii Wasiirka doonayo inuu keydiyo khariidad ama burburiyo shaashadda Istanbul, ha ka xumaanin, ma uusan sameyn wax cilmi baaris ah oo ku saabsan mowduucan. Waxaan had iyo jeer uga digayaa Mudane Wasiirka in uu sameeyo bayaan isagoo baaritaan iyo falanqeyn ku sameynaya nidaamka si qoto dheer. Bal aan mar kale kuu digo. Laakiin nasiibdarro sharraxa nasiib darrada ah. Intaa waxaa dheer, 23 Juun 2019'da dib-u-eegis noocan ah iyo dhammaan heshiisyada noocan oo kale ah ayaa horeyba u joojiyay dadweynaha.
Xilli cusub ayaa billowday. Si kale haddii loo dhigo, marxalad cusub ayaa bilaabatay. Marka tan loo eego, 2019 23 Ilaa Bisha Juun, waxaan ka eegnaa arrimaha Istanbul aragti ka duwan tii hore. Faa'iidada bulshada mise faa iidada magaaladan? Markaan eegno aragtidaas, aragtideena ku saabsan Kanal Istanbul waa cad tahay. Waxaan fahansanahay in Mr. 16 uusan wali dareemin caddeyntan horteeda malaayiin dad ah. wax kasayn. Heshiisyo aan sharci ansax ahayn. Tusaalaha X, dhamaan heshiisyada waxaa kujira 2014, waxkastoo XX ah. Shirkaddaada Bimtaş ha u dejiso qorshahan. Hab-maamuusyada is-weydaarsiga si ururkiina u dhammaystiro hawshan 'Ma ahan kuwo khasab ah oo ansax ah. Wasaaradda ayaa qoreysa, laakiin waxaa jira hay'ado helaya oo tarjumaya ogeysiiskaas. Asxaabtaydu mar hore way qori doonaan jawaabaha lagama maarmaanka ah. Ku saabsan sababta ay u shaqeyn la'ahay ama tallaabada la qaadayo. Waxaan jeclaan lahaa inaan hoosta ka xariiqo in arrimahan oo kale aysan ku dhici doonin borotokoolka. Si kale haddii loo dhigo, waa sida in aannu iibinay meel sida IMM, wasaaraddu way soo iibsatay, shaqadu way ka dhammaatay ma aha wax sidan oo kale ah. Waxaan ka hadleynaa nolosha 2015 milyan oo qof. Marka waxaan ka hadleynaa waxyaabaha halista ku ah magaaladan. Mar labaad ayaan kuu sheegayaa Qoraal kale oo nasiib darro ah Wasiirka Gaadiidka oo leh faaruq kooban. ”
WAA INAAN KA OGAATO SHARCIYADA INAAN KU SAMEEYSAAN GO'AAN GO'AAN DIIWAAN GAL AH
Imamoglu wuxuu yiri, sorun Dhibaatada bankiyada dowlada wali majiraan? Ma haysaa doonis ku aaddan dibad-baxa marxaladdan?, Su'aasha, "Ma dhammaan doonto, waxay mar walba noqon doontaa baadi goobkeenna dibad-baxa. Waan ku faraxsanaan doonaa inaan markale kugu wargaliyo markii isbedel lagu sameeyo baananka gobolka. Waxaan dhihi lahaa, 'Eeg waxa amaahda fiican ee ay fureen, way caawinayaan.' Khalad ha sameyn .. Imamoglu, Haydarpasa iyo saxafiyiin weydiisanaya nidaamka maxkamadda ee ku saabsan saldhiga Sirkeci,, Kiiska waa uu socdaa. Hal maalin ka hor dhicitaanka rafcaankii ugu dambeeyay, Tareenka Gobolka ayaa difaacay. Waxaan sugeynaa xukunka maxkamadda. Waxaan rajeyneynaa in sharciga uu qaadan doono go'aan ilaalin ah damiirka bulshada. Markaan falanqeyno dhammaan howlaha sharciga ee ku saabsan mowduucan oo aan qaadanno fikradaha qareennada, Suuragal ma ahan in la dhammeeyo hindisada noocaas ah. Waxaan fileynaa sharciga inuu sameeyo go'aanka saxda ah ..
"Waxaan u nimid inaan maqalno nacaybkaas '.N
Imamoglu, "Adeegyada shaqaalaha qandaraaska ayaa la soo gabagabeeyey" su'aasha, "Ilaa iyo inta aan ogahay inaysan wali soo gabagabeynin. Asxaabteyda ayaa baaraya. Dabcan, waxa lagu eegaa hindisada waa waxa lagu eegaa inta u dhexeysa cidda heshay hindisada ugu habboon iyo cidda aan helin, iyo habka kormeerkiisa. Taasi waa sida aan u eegno nidaamka. Waagii hore wuxuu helay hindisada, hadda wuxuu u ekaan doonaa meel qoto-dheer dhacdada maadaama uu helayo. Waxaan u eegeynaa sidan soo socota: Ma jiraa cadaalad darro ama isku-dheellitirnaan la’aan? Mise mar labaad tartan caddaalad darro baa jirta? Waxaan u sheegay asxaabtayda, 'Baro.' Waxaan baaraynaa isaga. Duqa magaalada, xiisi kama qabo magacyada, shakhsiyaadka. Daneyntoodu waa socotaa, waan arkaa. Laakiin taas xiisi kama qabo. (Iyagoo tixraacaya qaar ka mid ah kooxaha warbaahinta) Xiisiintooda ayaa innaga socota. Sidoo kale waa inaan barinnaa dad badan iyo machadyo badan oo ku saabsan akhlaaqda suuban. Sababtoo ah waddanku wuxuu u baahan yahay inuu arko tusaalayaal wanaagsan. Uma imaanin masuuliyiintaan inaan nacno, mana ahayn inaan necbaano. Waxaan halkaan u joognaa inaan hogaamino hanaan cadaalad ah. Dareenkan, waxaan sii wadnaa jidkeenna. Laakiin haddii weli uu jiro tartan cadaalad darro ah, waxaan faray, 'Falanqee tan. Waxaan is idhi, ishaas isha ku hay. Laakiin haddii qof u qalmo dhamaadka maalinta, ka dib wuxuu qabanayaa shaqadiisa kormeer adag. Kormeer adag ma ahan isaga. Isla sidaas oo kale ayaa loo yahay qof walba ”.
Gaadiidka Dadka ayaa yiri "Haa K ilaa Kala mar kale